आर्युवेदमा पिपलको निकै महत्व रहेको छ । हामी विभिन्न घातक रोगबाट ग्रसित भएका हुन्छौं । त्यसमध्ये हृदयघात पनि एक हो जसबाट धेरै मानिसहरु पीडित भएका हुन्छन् । तर, यस प्रकारको रोगलाई पिपल प्रयोग गरेर निवारण गर्न सकिन्छ भन्ने कमैलाई मात्रै थाहा हुन्छ । आउनुहोस् पिपलबाट हृदयघातको औषधी कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर जानौं ।
१. पूर्णरुपमा विकसित पिपलका १५ वटा पात लिनुहोस् । हरेक पातको तलपट्टि र माथिपट्टिको भाग कैंचीले काट्नुहोस् र बीचको भागलाई पानीले सफा गर्नुहोस् । अब यी पातलाई एक गिलास पानीमा हल्का आगोमा पकाउनुहोस् । पानी सुकेर एक तिहाई भएपछि उक्त पानीलाई चिसो हुनासाथ छान्नुहोस् ।
यसरी छानेको पानीलाई चिसो ठाउँमा राख्नुहोस् । तपाईको औषधी तयार भयो । यसरी बनेको औषधीलाई हरेक दिन प्रत्येक ३ घण्टामा खानुहोस् । हृदयघात भएको केही समयपछि यस प्रकारको औषधी १५ दिनसम्म प्रयोग गर्दा पुन: हृदयघात हुने संभावना ९९ प्रतिशतले घटेर जान्छ । यदि तपाईं मुटुको बिरामी हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि यो औषधी बनाएर खान नभुल्नुहोस् ।
२. पिपलको पातमा मुटुलाई शान्त र मजबुद् बनाईराख्ने अद्भुत क्षमता हुन्छ । तपाईले बनाउनु भएको औषधीलाई बिहान ८ बजे, ११ बजे र दिउँसो ३ बजे ३ चम्चा लिनुहोस् । यसरी औषधी खाँदा खाली पेटमा खानु हुँदैन । औषधी खानुभन्दा अगाडि हल्कारुपमा केही खानु पर्दछ ।
औषधी खाइन्जेल चिल्ला कुरा तथा भात खानु हुँदैन । त्यस्तै मासु, माछा, अण्डा, रक्सी तथा चुरोट बिल्कुल खानु हुँदैन । चिल्लो तथा नुन पनि खानु हुदैन । अनार, मेवा, अमला, किसमिस, दूध, भिजाएको कालो चना, दही, फलफूलको जुसजस्ता चिज प्रयोग गर्दा औषधी अझै प्रभावकारी हुन्छ ।